Ihe kpatara eji eji kaadiboodu
Ọtụtụ ndị nwere ụlọ ahịa na ụlọ ahịa na-eji ihe ngosi osisi iji gosipụta ngwaahịa ha, mana iji kaadiboodu ngosipụta na-ewu ewu. Ga-ahụ ọkwa ngosipụta kaadiboodu na shelf a na-eji n'oge azụmahịa na ọbụna n'èzí ụlọ ahịa dị iche iche dịka isi zụọ (POP) ...
Gịnị bụ isiike Box? Igbe ndị na-agbanwe agbanwe bụ otu n’ime ụdị igbe igbe kacha achọ. Fọrọ nke nta niile okomoko ụdị ahu nagide isiike nkwakọ maka ha dị oké ọnụ ma na ịchọ siri isiokwu. A na-eji igbe siri ike akwakọba ihe maka ogologo oge, ntụkwasị obi, ike, na usoro siri ike. Ndị a dielectrics fo ...
Ngwá ụfụfụ EVA: Ntuziaka Kachasị Mma
Nwere ike ịchọta ihe ụfụfụ EVA ebe niile! Ndị na-eweta ụfụfụ EVA na-enyekarị ha dị ka akwa ụfụfụ EVA, ụfụfụ ụfụfụ EVA, ụfụfụ ụfụfụ ụfụfụ EVA, ụfụfụ ụfụfụ EVA na wdg. Ma ị maara n'ezie ụfụfụ ihe a? N'ebe a, anyị na-egosi gị ụzọ iji mara nke ọma ihe ụfụfụ EVA. Naanị ...